NextMapping | amụma nzuzo
Synthesis na Work Inc., dba Cheryl Cran na NextMapping anaghị anakọta ozi gbasara gị gbasara gị mgbe ị gara na Webụsaịtị belụsọ ma i jiri aka gị wepụta ozi a, dịka ọmụmaatụ ịkpọtụrụ anyị site na mpempe akwụkwọ ozi anyị, gụnyere izitere anyị ajụjụ. Anyị agaghị ekerịta ozi gị na ndị ọzọ na-abụghị nke nzukọ anyị, na-abụghị ihe dị mkpa iji mezuo iwu gị.
Ọ bụrụ na ị na-ajụ ka anyị ghara, anyị nwere ike ịkpọtụrụ gị site na email na iso na-agwa gị banyere ọpụrụiche, ọhụrụ na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ, ma ọ bụ mgbanwe a na iwu nzuzo.
Ozi Ịnweta na Njikwa gị
Nwere ike ịpụ na kọntaktị ọ bụla ị ga-enwe n'ọdịnihu. Can nwere ike ịme ihe ndị a n’oge ọ bụla site na ịkpọtụrụ anyị site na adreesị ozi-e ma ọ bụ akara ekwentị enyere na webụsaịtị anyị. Ozi nkeonwe anakọtara n'ọnọdụ ndị a nwere ike ịgụnye aha gị, nkọwa kọntaktị, adreesị ozi-e, na akara ekwentị. Anyị anaghị ekesara onye ọ bụla ozi ma ọ bụ ree ya ozi gị.
A ga-agwa ajụjụ ọ bụla: info@nextmapping.com